कांगे्रसले हिन्दू धर्मको अभिमतलाई सम्मान गर्नुपर्छ – News Portal of Global Nepali
कांगे्रसले हिन्दू धर्मको अभिमतलाई सम्मान गर्नुपर्छ
28/03/2017 मा प्रकाशित
शंकर भण्डारी, वन मन्त्री, कांगे्रस केन्द्रीय सदस्य
नेपाली कांगे्रसका केन्द्रीय सदस्य तथा वन मन्त्री शंकर भण्डारीले नेपाली कांगे्रसभित्र हिन्दू धर्मप्रतिको अभिमतलाई सम्मान गर्नुपर्ने बताएका छन् । आवश्यक परे जनमतसंग्रहमा जानसमेत कांगे्रस तयार हुनुपर्ने नेता भण्डारीको मत छ । कांगे्रस नेता खुमबहादुर खड्का नजिक मानिनु हुने मन्त्री भण्डारीले हिन्दू धर्मको एजेन्डाबार पार्टीको चालू बैठकमै छलफल हुने विश्वास गरे । वर्तमान राजनीतिमा कांगे्रसको भूमिका, स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी तथा हिन्दू धर्मबारे गरिएको कुराकानी
० कांगे्रस चुनावमा जान्छ कि संविधान संशोधनतिर ?
– चुनाव अनिवार्य भइसक्यो, चुनावका लागि नेपाली कांगे्रसले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । संविधान जारी भएपछि देखिएको राजनीतिक असहमति, मधेशी दलहरुको असन्तुष्टिलाई पनि व्यवस्थापन गरेर निर्वाचनसँगै अघि बढ्नुपर्छ । यही विषयमा हामी अहिले गम्भीर ढंगले बहसमा केन्द्रित छौं ।
० समय थोरै छ, संविधान संशोधन नगरी चुनावमा जानु हुँदैन भनिएको रहेछ ?
– जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व हामी सबैले मनन गर्नुपर्छ । संविधान जारी भइसकेपछि पनि एक किसिमको द्वन्द्व देखियो । गम्भीर राजनीतिक असमझदारी मुलुकमा कायमै छ । मुलुकले राजनीतिक स्थायित्व पाएको छैन । यो यथार्थतालाई मनन गर्दै, देखिएका समस्यालाई समाधान नगरी एक पक्षीय ढंगले अघि बढ्छु हिजो पनि भन्न सकिन्थ्यो । हिजो किन बढेनौं, एमाले अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँले किन निर्वाचनको घोषणा गर्न सक्नुभएन । यी कुरालाई सबैले वस्तुगत विश्लेषणसहित मनन गरौं, सकेसम्म सबै मिलेर मधेशकेन्द्रित दलको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने उपाय खोजौं । उहाँहरुलाई निर्वाचनमा लिएर जाऔं र संविधान कार्यान्वयन गरौं भन्ने नेपाली कांगे्रसको उद्देश्य हो ।
० संविधान संशोधन नगरी चुनाव जाने ?
– संविधान संशोधन नगरी जाने हो भने आजसम्म किन कुरेको ? एमाले अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएका बेला निर्वाचनको मिति किन घोषणा नगरेको ? उहाँले पनि ९ महिनासम्म सरकारको नेतृत्व गर्दैगर्दा निर्वाचन किन गराउन सक्नुभएन । यो समय खेर जाँदैन थियो नि ।
० तपाईंहरु निर्वाचन गराउन सरकारमा जानुभएको होइन ?
– त्यो प्रयास हामीले गरेका छौं, मधेश केन्द्रित दल सडकमा थिए, सदनमा ल्यायौं, वार्तामा बसायौं, समस्या समाधानका लागि संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरायौं । पछिल्ला परिघटनामा सँगसँगै हिड्ेको नेकपा एमाले अहिले जुन विचार राख्दैछ, एउटा पक्षलाई उत्तेजक बनाउने किसिमका विचार प्रवाह गर्दैछ, भाषा प्रयोग गर्दैछ, यो विचरणीय र बुझ्न नसक्ने विषय छ ।
० मधेशी मोर्चा फर्किएर फेरि सडकमै पुगेका छन् नि ?
– जो जसबाट गल्ती भए, जो जसबाट राम्रा काम भए ती पुराना कुरा छोड्छौं, सबैजना एकै ठाउँ उभिएर अन्तिम प्रयास गरौं भन्ने हाम्रो पार्टीको निष्कर्ष हो । संसदमा दर्ता भएको संशोधन प्रस्तावलाई प्रकृयामा लैजाऔं । संसदले जे निर्णय गर्छ, त्यही आधारलाई टेकेर निर्वाचनमा जाऔं भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो ।
० खुट्टा कमाइराख्नु भएको छ ?
– जिम्मेवारी वहन गरेको, लचकता अपनाएकालाई खुट्टा कमाएको भनेर व्याख्या गर्नु उचित हुँदैन ।
० एमालेले संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउन दिएन भनिरहनुभएको छ ?
– त्यो प्रष्ट देखिएको कुरो हो, एमालेले असहयोग गरेको छ ।
० एमालेलाई दोष दिनुभन्दा सत्तारुढ दल किन अघि बढ्न नसकेको ?
– संविधान संशोधनको प्रकृयालाई कुनै हालतमा नरोक्ने हाम्रो निष्कर्ष हो ।
० कहिले अघि बढ्छ ?
– प्रधानमन्त्रीज्यू चीन भ्रमणबाट फर्किएपछि यस विषयमा सत्तारुढ दलको बैठक बस्छ, हामी हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्छौं । मिलेर जाऔं, प्राप्त उपलब्धीलाई रक्षा गरौं भन्ने नै हाम्रो प्रयास हुनेछ ।
० कांगे्रस अब कसरी अगाडि बढ्छ ?
– मुलुक संकटमा रहेका बेला दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेले जस्तै आफ्नै ढंगले हिड्ने हो भने भोलि यो मुलुक कसले सम्हाल्छ ? कसैलाई दुःखी बनाउने वा खुशी पार्न कांगे्रसलाई आवश्यक छैन । समस्या सल्टाएर जाऔं भन्ने कांगे्रसको उद्देश्य हो ।
० कसरी मनाउनु हुन्छ मधेशवादी दल र एमालेलाई ?
– मोर्चालाई सीमांकन विवाद आयोग बनाएर जाऔं भनेका छौं, सीमांकनबाहेकको संविधान संशोधन प्रस्ताव पास गरेर एमालेलाई भन्दैछौं । हाम्रो कुरा स्पष्ट छ ।
० यो कुरा त मानेका छैनन नि ?
– सबै कुरा कांगे्रसले मात्र चाहेर हुँदो रहेनछ । माने मान नत्र अघि जान्छु भन्न कांगे्रसजस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीले भन्न सुहाउँदैन । हरेक अप्ठ्यारोलाई सजिलो बनाउँदै नेतृत्व गर्नुपर्ने कांगे्रसलाई त्यो अभिभारा सुम्पेको छ । घुर्की र फुर्की, धम्की र घमन्डले कुनै कुरा प्राप्ति हुँदैन, मुलुक सबैभन्दा ठूलो कुरा हो ।
० अदालतको विषयमा केन्द्रीय समितिमा छलफल भएको हो ?
– आईजीपी नियुक्तिमा कानुनी कुरालाई बढी जोड दिएर विश्लेषण गर्दिनुप¥यो, छलफल गर्दिनुप¥यो । नेपाल प्रहरीमा आईजीपी कसलाई बनाउने भन्न विषय नितान्त सरकारको अधिकार क्षेत्रको विषय हो । यस विषयमा अदालतमा नजिरहरु छन् । लोकतान्त्रिक संस्कारमा हुर्केको मान्छेले अदालतको सम्मान गर्छु, मान हानीको विषयमा कल्पना गर्न सक्दिैन । तर दुर्भाग्य कानुनको संरक्षण गर्नुपर्ने निकायले सरकारको निर्णयलाई उल्टाउने काम भयो । यो गम्भीर, चिन्ता र आश्चर्यको विषय भएको छ ।
० अदालतभित्र पुनः अर्को निवेदन दिनुहुन्छ ?
– अदालतको सम्मान गर्छौ, गरिरहने छौं । सरकारको कार्यकारी अधिकारप्रति पनि हामी दृढतापूर्वक लाग्छौं ।
० अदालतको निर्णयविरुद्ध कांगे्रस जानसक्दैन ?
– सरकारको निर्णय गर्ने जुन अधिकार छ, त्यो कुरामा हामी दृढ छौं । सरकारको जिम्मेवारीप्रति हामी स्पष्ट छौं ।
० के गर्नुहुन्छ ?
– अदालतको सम्मान कांगे्रसले गर्छ, त्यस्तै लोकतान्त्रिक विधिले बनेको सरकारको कार्यकारी अधिकारलाई स्थापित गर्न कांगे्रस दृढ छ ।
० सरकारको निर्णय उल्टाइदियो नि ?
– आफ्नो पोजिसनमा अघि बढ्दा सरकारले आफ्नो अधिकार दृढतापूर्वक लागू गर्छ ।
० चन्दलाई नै अघि बढाउने ?
– त्यो कुरा भोलिको निर्णयले थाहा हुन्छ । लोकतान्त्रिक विधि र प्रकृयामा सरकार कसैको बाधा बन्देज र दबाबमा चल्ने भन्ने हुँदैन । आफ्नो अधिकारलाई दृढतापूर्वक लागू गर्छ ।
० पार्टीभित्र धर्मनिरपेक्ष्यका विरुद्धमा कुरा उठ्यो ?
– धर्मनिरपेक्ष्य भनेपछि आन्दोलनको कुरा जोडिन्छ । धर्मनिरपेक्ष्यका विषयमा कसैले नबोलेको आन्दोलन थियो, नियोजित र षड्यन्त्रमूलक ढंगले लागू गरियो । बाध्यात्मक रुपमा संविधानमा यो कुरा लेखिएको छ । यो असान्दर्भिक ढंगले यो जोडिएको छ भन्ने जनमत छ, हामीले त्यही ढंगले लिएका छौं ।
० संविधानविरोधी भएन कांगे्रस ?
– विरोधी होइन, आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्दै अगाडि बढ्ने भनेर सबैले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको होइन ।
० राप्रपाको दुईवटा बुँदा मिलेन भनेर निर्वाचन आयोगले खारेज गर्दिएको बिर्सनुभो ?
– त्यो पनि गलत हो । त्यस्ता विचार भएका कतिपय दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका छन् । जुन दलका विचार संविधानमा भएका व्यवस्था भन्दा विपरित छन् । संविधानमा भएको व्यवस्था जनताले चाहेको अवस्थामा परिवर्तन हुनसक्ने छ, अथवा नभएका व्यवस्था पनि समावेश गर्न सकिन्छ ।
० कांगे्रस हिन्दू राष्ट्रमा फर्किन्छ ?
– कांगे्रस मात्र होइन, कुनै पनि दलले लोकतन्त्रमा आस्था राख्छ भने जनताको अभिमत, भावनालाई सम्मान गर्नुपर्छ । नेपालमा अहिले हिन्दू धर्मका पक्षमा सचेत र जागरुकका साथ लागेका छन् । यसलाई सम्मान गर्ने काम कांगे्रसले गर्नुपर्छ भन्ने ठूलो अभिमत पार्टीभित्र छ ।
० हिन्दू राष्ट्रका लागि जनमतसंग्रहमा कांगे्रस जानसक्छ ?
– नेपाली कांगे्रस कहिले पनि धर्मनिरपेक्ष्यको पक्षमा छैन । कांगे्रसको दस्तावेजमा त्यस्तो काहिँ धर्मनिरपेक्ष्य उल्लेख छैन । अहिलेको समस्या समाधान गर्न आवश्यक परे बढी विवाद गर्नुभन्दा जनतामा जानु राम्रो हुन्छ ।
० आवश्यकता हो ?
– हो, आवश्यकता । यो विषयमा कांगे्रस गम्भीर नभए मुलुक नयाँ संकटमा पर्छ । त्यसकारण यो विषयमा कांगे्रस जानुपर्छ भन्ने मजस्ता व्यक्तिहरुको दृष्टिकोण छ ।
– भीम आत्रेय
‘हरुवा प्रचण्ड ! तिम्रो समर्थन चाहिएको छैन, लैजाऊ फिर्ता’
प्रदेश २ का चार सांसदलाई पदमुक्त गर्न माओवादी केन्द्रको सिफारिस
१७०३७	पटक पढिएको